Shaqsigan oo hadda xabsi ku jira ayaa shaqo muhiim ah u hayey ururka gacansaarka la leh Al-Qaacida. | Xuquuqda Sawirka: Daily Nation
NAIROBI, Kenya – Intii u dhaxeysay 2008-dii illaa iyo 2012-kii, Fawaz Axmed Xamdun, waxaa magaciisa laga hadalhayey guri walba oo ku yaala Mombasa, sababtoo ah in uu ahaa ciyaaryahan caan baxay.
Kooxda kubadda cagta ee Korea FC ayaa waxa uu kula guuleystay koobab badan isaga oo kala ciyaari jiray khadka dhexe ee weerarka.
Isaga oo ku guda jira waxbarashada dhigayana dugsiga Kikoani Primary School ayaa waxa uu ku gaarey darajadaas.
Kolkii dambe waxa uu isaga baxay iskuulka si uu waqti badan ugu helo kubadda cagta, sidda ay sheegeen dadka degaanka. Taas waxay fursad u siisay in uu sii kordhiyay hibadiisa.
Balse, sanadkii 2012-kii ayaa mar qura laga waayey shaashadaha kadib markii uu kamid noqday xidigaha naadiga Old Town ee ka dhisan xaafadda Majengo oo hoostagta magaaladda Mombasa.
- Xagjireyn -
Xamdun, oo haatan xabsi ugu jira eedeymo la xiriira argagixisimo, ayaa waxaa laga xagjireeyay Masjidka Musa, halkaas oo uu ka bilaabay in uu AlShabaab u qoro dhalinyaradda isaga oo wakiil ah kana tirsan Kufungwa.
Kufungwa ayay laamaha ammaanka rumeysan yihiin in ay tahay shabakadda dhalinyaradda u qorta ururka fadhigiisu yahay Soomaaliya.
Faris Haadi, 20-jir, ayaa la aaminsan yahay in uu Xamdun dhuufsaday una fududeeyay socdaalkiisa Soomaaliya. Faris ayay qoyskiisu sheegeen in uu maqan yahay tan iyo 8-dii September 2019-ka.
Xariga Xamdun ayaa ka dambeeyay kadib dilka saddex ruux oo la tuhunsan yahay kuwaasi oo ay kamid yihiin; Salama Salim oo ku magac dheer Bakari Mnyapara iyo Mkubwa Sadi Ramadhan.
Booliska oo aan carabaabin shaqsiga saddexaad ayaa tibaaxay in saddexdooda ay qorsheynayeen weeraro ay gobolka ka geystaan.
Xariga iyo khaarijinta ayaa timid saddex maalmood kadib markii bileysku soo saarey digniin ku aadan in AlShabaab ay todoba xubnood u soo direen Kenya si ay weeraro uga fuliyaan goobo cayiman.
Bartilmaameedyadda ayaa lagu kala sheegay xarunta Hay’adda Maamulka Dekadaha, garoonka diyaaradaha iyo Boosteejadda Tareenka. Goobahan ayaa dhamaantooda ku yaala Mombasa.
"Meelaha kale oo ay qorsheynayeen in ay beegsadaan waxaa kamid ah huteeladda iyo xeebaha teedsan xeebaha Kenya," ayaa lagu yiri warbixinta kasoo baxday hay'addaha nabad-gelyadda.
Salim iyo Ramadhan, oo ay Talaadadii lasoo dhaafey dileen booliska, ayaa horey loo xiray eedeymo la xiriira argagixisinimo.
Macluumaadka ayaa muujinaya in Saalim la xiray Maaj 2017-kii isaga oo kusii jeeda Soomaaliya uuna wehliyo Suleiman Hemed Mwandilo.
- Tababar argagixisinimo -
Labadooda oo lagu xiray Takaba oo Mandera ka tirsan, ayaa maxkamad lasoo taagay waxaana kolkii dambe lagu sii daayey damaanad. Balse waxay tan iyo waqtigaas ku dhuumaaleysanayeen goob aan la carabaabin.
Dhinaca kale, Ramadhan, oo bishii April laga qabtay Likoni oo Mombasa ka tirsan, ayaa lagu soo oogay 12-dacwad oo la xiriirta argagixisinmo.
Dacwadaha waxaa kamid ah in uu xubin ka ahaa AlShabaab iyo in uu daabacay warbixino dhiirogelinaya rabshado.
Booliska ayaa u sheegay Maxkamada in Ramadhan uu khatar ku yahay Amniga Qaranka. Sikastaba, waxaa kolkii dambe lagu sii daayey damaanad.
- Qorsheynta weeraro -
Ramadhan iyo Salim ayaa la dilay, waxaana laga soo furtay goobta lagu khaarijiyey oo Dudus ah hub. Guri ka kooban 12-qol ayay ku noolaayeen.
Hubka lasoo furtay ayaa isugu jiray; qoryo AK 47 ah iyo walxo qarxa. Goobtaas ayaa la aaminsan yahay in ay ku maleegayeen weeraro.
Qof saddexaad oo la sheegay in ay qaraabo ahaayeen ayaa dhaawac ahaan lagu qabtay kahor inta uusan dhiman. Booliska ayuu tusiyey dukumiintiyadooda. Meydkiisa ayaa nan wali la aasin.
Illo wareedyo ayaa u sheegay Sunday Nation in Saalim uu ku biiray xoogaga gacansaarka la leh Al-Qaacida markii uu isaga baxay ka ganacsiga maandooriyaha oo uu kala shaqeyn jiray nin lagu magacaabo Ba Jay.
Kadib markii uu noqday qof nadiif ah uuna kasoo qalin-jebiyey xarun dadka lagu dhaqan-celiyo ayaa waxa uu noqday xubin firfircoon oo AlShabaab u qorta dhalinyaradda aaga uu deganaa.
Shabakadda Ramadhan Kufungwa ayuu xubin ka noqday. Kufungwa waa hogaamiyihii hore ee Masjidka Muusa, kaasi oo dib kaga biiray dagaalameyaasha AlShabaab kadib dilkii Axmed Iimaan Cali.
Cali oo geeridiisa ay su'aallo ka dhasheen ayaa la aaminsan yahay in uu yahay maskaxdii ka dambeysay weerarkii Ceel Cadde ee 2015-kii iyo duulaankii Dusit D2 ee uu Maahir Riziki ka ahaa is-miidaamiye.
Labada dalka ayaa u dhaxeeya muran xoog leh oo ku saabsan xuduuda Badda iyadoo...